Ifulethi Elihlanzekile Nelinethezekile eDowntown Macon - I-Airbnb
Ifulethi Elihlanzekile Nelinethezekile eDowntown Macon
693 okushiwo abanye
Ukungena okuyimfihlo nokungena ngokwakho. Hlala kuleli fulethi elihlanzekile, elinethezekile, elithengekayo e-Macon yomlando. Phakathi kwemayela elingu-1 ukuya ezindaweni zokudlela ezisedolobheni. Hamba uye eMercer ngebhola lezinyawo ne-basketball. Ilungele Isikhungo Sezokwelapha, iRobins Air Base, iGrand Opera House, iCapitol Theatre, iMacon City Auditorium, umfula i-Ocmulgee, nokuningi! Indawo enhle ongahlala kuyo ukuze uzwe umlando wendawo, i-Cherry Blossom festival, noma i-Bragg Jam. Leli fulethi langasese eliyisitezi esiphezulu liyisizinda esihle sasekhaya sokuvakasha kwakho.
Ifulethi lonke elinomnyango wangasese olungele ukuya edolobheni kufaka phakathi ikhishi eligcwele kanye nobumfihlo bakho ngentengo enhle! Silwela ukunikeza inani elikhulu futhi sinikeze indawo enkulu efakwe kahle. Amanani entengo acabangela ukuthi yikhaya elidala futhi linendawo yokupaka emgwaqweni. Kuyinto enhle kakhulu elungele ukuma kwakho kwe-Macon! Leli fulethi liseduze nazo zonke izinto ezinhle ezenzeka edolobheni. Indawo yokulala ihlanganisa umbhede wendlovukazi ekamelweni kanye nombhede kasofa okhipha usayizi ogcwele kanye nomatilasi womoya olingana nendlovukazi onepompo kagesi egumbini lokuphumula.
I-HDTV engu-32" ene- I-Roku, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.89 out of 5 stars from 693 reviews
4.89 · 693 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-693
Indlu itholakala kalula eduze kwaseMercer University kanye neTattnall Square Park (0.7 miles), Macon Dog Park (0.8 miles) kanye neThe Medical Center yaseCentral Georgia (0.2 miles). Izinto ezikhangayo eziseduze zihlanganisa izindawo zokudlela kanye nemigoqo yedolobha njengeH&H Restaurant (0.5 miles) kanye neRookery (0.9 miles), Washington Park (0.6 miles), Coleman Hill (efaka isilayidi sikakhonkolo esinosayizi omdala esingaphansi), i-Cox Capitol Theatre (0.9 miles), i-Grand Opera House (imayela elingu-1), i-Rose Hill Cemetery yomlando (amamayela angu-1.5). Iminyuziyamu eseduze ihlanganisa i-Georgia Sports Hall of Fame kanye ne-Tubman African American Museum (1.2 miles) kanye neminyuziyamu yezindlu efana ne-The Hay House kanye ne-Cannonball Museum. I-Ocmulgee Heritage Trail (amamayela angu-2.5 ukuya e-Spring St trail head), i-Ocmulgee Indian Mounds enemnyuziyamu yamahhala (amamayela angu-3), kanye ne-Amerson Water Park (amamayela angu-4) inikeza uhambo oluseduze lwangaphandle olunezindlela, ukufinyelela emfuleni, nokuningi. I-Robins Air Force iyidrayivu esheshayo yehla nge-HWY 247 (19 miles). Izitolo zokudla eziseduze zifaka i-Kroger (2.0 miles) nezinye.
Uma uza e-Macon uzohlala, usebenze, noma udlale ngemicimbi efana ne-Bragg Jam, i-Macon Film Festival, i-Cherry Blossom Festival, ne-Magnolia Soap Box Derby, i-Pan African Festival, ne-Ocmulgee Indian Celebration, imishado edolobheni, ibhizinisi eMercer , Isikhungo Sezokwelapha, noma umsebenzi omfushane e-Robins AFB lena indawo enhle yokuhlala. Bheka i-Ovations 365 ku-inthanethi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nemicimbi eseduze.
Usokhaya noma okhethiwe uzotholakala ngesikhathi sokuhlala kwesivakashi ngocingo futhi anganikeza usizo mathupha uma kudingeka.
Ukungena sekwephuzile kulungile njengoba sinebhokisi lokukhiya futhi sizokunikeza imiyalelo yokuthi uzivumele ungene.
Sicela ukuthi isivakashi sithumele umlayezo uma usuhamba ukuze sihlanze.
Ukungena sekwephuzile kulungile njengoba…